<img src="https://4.bp.blogspot.com/-xyxeRicFDX4/XEBKYKHSO3I/AAAAAAAB75s/ojZ-FuvENHklRE0NidAnxpOHSbXy19_hwCLcBGAs/w1200-h630-p-k-no-nu/3.jpg" alt="Facebook မှာ Profile ချိန်းလိုက်လို့ သွား(၃)ချောင်းကျွတ်သွားတဲ့ မိန်းကလေး">
<img src="https://1.bp.blogspot.com/-me4C2CHbC1g/XEA-td8zTuI/AAAAAAABmhI/rqBrQ1j_uNoBomvMHfMzaREHFxpRiIqSgCLcBGAs/w1200-h630-p-k-no-nu/c.jpg" alt="အနုပညာလောကမှာ လေးစားအားကျရတဲ့ တဦးတည်းသော အိုင်ဒေါကို ထုတ်ပြောလိုက်တဲ့ သက်မွန်မြင့်">
<img src="https://2.bp.blogspot.com/-LkFq9XI0yy0/XEBHMz8WEBI/AAAAAAABmig/SUHgRExyO6wLpa_IOBoNjW8iL3rX8QDvgCLcBGAs/w1200-h630-p-k-no-nu/d.jpg" alt="​ရေသူမလေး သုသုဆီက အချေခံလိုက်ရတဲ့ တက္ကသိုလ်ဂွမ်းပုံတို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့အခွီဗီဒီယို">
​ရေသူမလေး သုသုဆီက အချေခံလိုက်ရတဲ့ တက္ကသိုလ်ဂွမ်းပုံတို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့အခွီဗီဒီယို
<img src="https://burma.irrawaddy.com/wp-content/uploads/2019/01/YCDC1.jpg" alt="ရန္ကုန် စည္ပင် ကိုယ္စားလွယ်လောင်း လွေ်ာက္ထားခြင့် ၁၀ ရက် အခ်ိန်ပေး">
ရန္ကုန် စည္ပင် ကိုယ္စားလွယ်လောင်း လွေ်ာက္ထားခြင့် ၁၀ ရက် အခ်ိန်ပေး
ကိုယ္စားလွယ်လောင်း အမည္စာရင်း တင်ြသင်းတဲ့ နေရာမွာ ၂ မ်ိုး ရွိပါတယ်။ တမ်ိုးက မြို့နယ် အဆင့် ကိုယ္စားလွယ်လောင်း တင်ြသင်းတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ္မ်ားဟာ မိမိနေထိုင်ရာ မြို့နယ္မွာပဲ ကိုယ္စားလွယ်လောင်း အျဖစ် အမည် စာရင်း တင်ြသင်းရမျွာဖစ္ပါတယ်
<img src="http://thevoicemyanmar.com/media/29465/conversions/feature_image.jpg" alt="ဟင်္သာတတွင် ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ်များ အခမဲ့ဖြန့်ဝေ">
<img src="http://thevoicemyanmar.com/media/29464/conversions/feature_image.jpg" alt="တောဆင်ရိုင်းများကို ခြောက်လှန့်မည့်ဟွန်းများ တပ်ဆင် ">
တိုက်ကြီးမြို့နယ်အတွင်း ပဲခူးရိုးမတောင်ခြေရှိ ကျေးရွာများ တောဆင်ရိုင်းများ ဝင်ရောက်မှုများလာခြင်းကြောင်း ဇန်နဝါရီလ ၁၇ တွင် တောဆင်ရိုင်းများ ခြောက်လှန့်နိုင်သည့်အသံကျယ်လောင်သည့်ဟွန်းများကို ကူညီထောက်ပံ့ခဲ့ကြောင်း Smithsonian Consarvation Biology Institution (SCBI)အဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူက ပြောကြားသည်။
<img src="http://thevoicemyanmar.com/media/29469/conversions/feature_image.jpg" alt="မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်စပ် ခြံစည်းရိုးတည်ဆောက်မှု ပြန်စိစစ်မည်ဟု ဒါကာရှိမြန်မာသံအမတ်ပြော">
မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်စပ် ခြံစည်းရိုးတည်ဆောက်မှု ပြန်စိစစ်မည်ဟု ဒါကာရှိမြန်မာသံအမတ်ပြော
မြန်မာ -ဘင်္ဂလာဒေရှ့်နှစ်နိုင်ငံကြား နယ်စပ်ခြံစည်းရိုးအခိုင်အမာတည်ဆောက်နေခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ဒါကာရှိမြန်မာသံအမတ်အား ဆင့်ခေါ်မေးမြန်းခဲ့ရာ နယ်နိမိတ်အထောက်အထားများကို ပြန်လည်စိစစ်ပေးမည်ဟု မြန်မာသံအမတ်က တုံ့ပြန်ခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးအောင်ကျော်ဇံက ပြောကြားသည်။
ဦးပိန်တံတားတွင် အုပ်စုဖွဲ့ စက်တပ်လေထီး အလှပြပျံသန်း
<img src="http://thevoicemyanmar.com/media/29467/conversions/feature_image.jpg" alt="ဦးပိန်တံတားတွင် အုပ်စုဖွဲ့ စက်တပ်လေထီး အလှပြပျံသန်း">
မြန်မာနိုင်ငံမှ စက်တပ်လေထီးပျံသန်းသူ (Paramotor) များနှင့် အာဆီယံ စက်တပ်လေထီးပျံသန်းသူများကလပ်မှ ထိုင်းနိုင်ငံသား စက်တပ်လေထီးမောင်းနှင်သူများ ပူးပေါင်းကာ တောင်သမန်အင်းနှင့် ဦးပိန်တံတားဝန်းကျင်တွင် အုပ်စုဖွဲ့ အလှပြပျံသန်းမှုတစ်ခုကို ဇန်န၀ါရီလ ၁၇ ရက်က ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
<img src="http://thevoicemyanmar.com/media/29463/conversions/feature_image.jpg" alt="ရိုက်တာသတင်းထောက်အမှု ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်အထိ အထူးအယူခံတက်ရန် စီစဉ်">
ရိုက်တာသတင်းထောက်အမှု ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်အထိ အထူးအယူခံတက်ရန် စီစဉ်
နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက် အက်ဥပဒေ ချိုးဖောက်မှုဖြင့် ထောင် ၇ နှစ်စီ ချမှတ်ခံရသည့် ရိုက်တာသတင်းထောက်အမှုအတွက် အထူးအယူခံကို ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်သို့ ဆက်လက်တင်ပြမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းထောက်နှစ်ဦး၏ရှေ့နေ့ ဦးသန်းဇော်အောင်က ပြောကြားသည်။
ဘာမှမစားရသေးခင် ကော်ဖီ အရင်သောက်မယ်ဆို ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်သလဲ ???
<img src="https://4.bp.blogspot.com/-6W2Gk_hDwwI/XEA6x6EATOI/AAAAAAABmg8/M6S_BO5GlhsfOedoSuAMlNHPBMiWsJyNQCLcBGAs/w1200-h630-p-k-no-nu/b8.jpg" alt="ဘာမှမစားရသေးခင် ကော်ဖီ အရင်သောက်မယ်ဆို ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်သလဲ ???">
<img src="https://3.bp.blogspot.com/-UnIaRtfx_zI/XEA5bUqXBOI/AAAAAAABmgk/UdSS1wQFokQob4lo8LeRyon8uf1-jJrIwCLcBGAs/w1200-h630-p-k-no-nu/b6.jpg" alt="ကားစီးရင် ကားမူးတဲ့ဒုက္ခကို ခံစားရသူများ အတွက် (မျှဝေပေးပေးလိုက်ပါတယ်)">
<img src="https://2.bp.blogspot.com/-ZBbAVfvwn30/XEAzOO8Z-II/AAAAAAABmfQ/FkDB8OaOolYbdq8CPTtNzpfgig5iTbpRQCLcBGAs/w1200-h630-p-k-no-nu/a8.jpg" alt="Sexy ဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်ခဲ့မိလို့ နောင်တရနေတဲ့ ဘေဘီမောင်">
Sexy ဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်ခဲ့မိလို့ နောင်တရနေတဲ့ ဘေဘီမောင်
<img src="https://4.bp.blogspot.com/-U8WTsikDhTc/XEA2bzfhXLI/AAAAAAAB74c/EExRh8-9E9gVAECkp7NsZQQrzHGcw1pzgCLcBGAs/w1200-h630-p-k-no-nu/3ece6cb102f37271860f41b9ede1bbb5.jpg" alt="ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မရှိတဲ့ စပ်ဆေးတွေ လုံးဝမသောက်ဖို့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ထုတ်ပြန်">
ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မရှိတဲ့ စပ်ဆေးတွေ လုံးဝမသောက်ဖို့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ထုတ်ပြန်
<img src="https://4.bp.blogspot.com/-gothm7h30JU/XEA1mnzYWvI/AAAAAAAB74Q/d802u0pQ4noUlf0olxkDfU_eAHGDbqi5gCLcBGAs/w1200-h630-p-k-no-nu/1.jpg" alt="ဘဝမှာ ခံရပါများလာတော့ မာနပိုကြီးသွားတယ်ဆိုတဲ့ အေသင်ချိုဆွေ">
<img src="https://1.bp.blogspot.com/-H8GHVawudDU/XEA1YnyialI/AAAAAAABmfw/XgSqCt9FmAMSFoCmIbPIPRxR7xHjwhf6gCLcBGAs/w1200-h630-p-k-no-nu/b.jpg" alt="နာမည်ကျော်မင်းသား နေတိုးနဲ့အတူ ကြော်ငြာရိုက်ကူးနေတဲ့ ဆရာဝန်မလေး ပိုးမမှီသာ">
<img src="https://4.bp.blogspot.com/-Oa94n9mFLIQ/XEA4VJyLkaI/AAAAAAAB74w/C_8kyfpgkgUprDI5numUii4IXmGT_aJDwCLcBGAs/w1200-h630-p-k-no-nu/1.jpg" alt="ဦးမင်းစိန်မရှိပေမယ့် ရေသန့်ဘူးကို ကိုယ်တိုင်ထမ်းပြီးပို့မယ့်ဇနီးဖြစ်သူ ဆုလဲ့ဝင်း">
<img src="https://2.bp.blogspot.com/-vUaXLKSaMVo/XEA6iBo8OUI/AAAAAAABmg4/BSBsJoS6kaI6ZTeNZee7pn-MYMUWS95MQCLcBGAs/w1200-h630-p-k-no-nu/16.png" alt="ခင်ပွန်းသည်ကြောင့် ကျန်းမာရေးကောင်းနေတဲ့ ရွှေမှုံရတီ">
<img src="http://thevoicemyanmar.com/media/29461/conversions/feature_image.jpg" alt="ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်း ဆင်ခြေထောက် ရောဂါကာကွယ်ဆေး ထပ်တိုက်မည်">
<img src="http://thevoicemyanmar.com/media/29459/conversions/feature_image.jpg" alt="AA အဖွဲ့ယာယီစခန်းကို တပ်မတော် တိုက်ခိုက်၊ အလောင်း ၅ လောင်းနှင့် လက်နက်အချို့ရရှိ">
AA အဖွဲ့ယာယီစခန်းကို တပ်မတော် တိုက်ခိုက်၊ အလောင်း ၅ လောင်းနှင့် လက်နက်အချို့ရရှိ
ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်ရှိ AA အဖွဲ့၏ ယာယီစခန်းကို တပ်မတော်စစ်ကြောင်းက ယမန်နေ့ နံနက်က ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာ အလောင်း ငါးလောင်းနှင့် လက်နက်အချို့သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်း တပ်မတော်ကသတင်း ထုတ်ပြန်သည်။
<img src="http://thevoicemyanmar.com/media/29462/conversions/feature_image.jpg" alt="အမြန်လမ်းတွင် လိုင်စင်မဲ့မော်တော်ယာဉ် သုံးစီးဖမ်းမိ">
အမြန်လမ်းတွင် လိုင်စင်မဲ့မော်တော်ယာဉ် သုံးစီးဖမ်းမိ
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းပေါ်တွင် ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီကျော်မှ ည ၇ နာရီခန့်အကြား ၁၉ နာရီအတွင်း လိုင်စင်မဲ့ယာဉ်သုံးစီးဖမ်းမိခဲ့ကြောင်း အမြန်လမ်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးထံမှ သိရသည်။
<img src="http://thevoicemyanmar.com/media/29460/conversions/feature_image.jpg" alt="ကျောက်ကြီးတွင် တစ်ရက်အတွင်း တရားမဝင်သစ် ရှစ်တန်ကျော်ဖမ်းမိ">